Jadon Sancho: “Waxay noqon doontaa Waalli ah, marka aan saddexdeennu isku helo garoonka gudihiisa” – Gool FM
Jadon Sancho: “Waxay noqon doontaa Waalli ah, marka aan saddexdeennu isku helo garoonka gudihiisa”
(Manchester) 09 Sebt 2021. Jadon Sancho ayaa shaaca ka qaaday inuu sugi kari la’ yahay inuu Kooxda Manchester United kala garab ciyaaro Marcus Rashford.
21-sano jirkaan ayaa Rashford garoonka kula wadaagay xulka England, laakiin weli Weeraryahankan kulama ciyaarin heer kooxeed, maxaa yeelay xiddigan ka soo baxay kuliyadda dhalinyarada ee Man United ayaa ka soo kabsanaya qalliin looga sameeyey garabka.
Sancho ayaa rumeysan inuu la yeelan doono xiriir waalli ah 23-sano jirkaan marka uu ku soo laabto garoommada, xiddiga xagaaga ka yimid Kooxda Borussia Dortmund ayaa sidoo kale ammaanay Mason Greenwood, kaasoo xilli ciyaareedka cusub ee Premier League ku bilaawday dar dar isla marakaana saddex gool dhaliyey saddexdii kulan ee uu illaa iyo hadda saftay horyaalka Premier League.
“Taasi waxay noqon doontaa isku xirnaan waalli ah marka Marcus Rashford uu soo laabto,” Sancho ayaa sidaas u sheegay UMM, wuxuuna hadalkiisa intaa ku daray: “Sida iska cad waxaan arkay xooggaa Mason Greenwood oo dhawaan tababarka ku jira – wuu waalan yahay.
“Wali waan is baranaynaa, sida iska cad dhaqdhaqaaqyo iyo wax la mid ah, inaan helno fahamkeenna, laakiin waxay noqon doontaa mid waalli ah marka dhammaanteenna aan isku helno garoonka gudihiisa”.
Sancho ayaa markii ugu horreysay safka hore ee Man United ku soo bilowday kulankii ay 1-0 guusha kaga gaareen Wolverhampton Wanderers, ka hor ciyaarihii caalamiga ah, waxaana uu ciyaaray 72 daqiiqo kulankii ka dhacay garoonka Molineux.
Juventus oo qorsheynaysa inay xagaaga soo socda bilaash ku qaadato xiddig ka tirsan Kooxda Barcelona